'I-Transformers: I-Movie' ibuyela Ematiyetha Amabili Wobusuku Wokugubha Umgubho Wayo wama-2 - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-'Transformers: I-Movie 'ibuyela Ematiyetha ama-2 Nights Okugubha iminyaka engama-35
I-'Transformers: I-Movie 'ibuyela Ematiyetha ama-2 Nights Okugubha iminyaka engama-35
Ama-Autobots, Phuma! Kepha, Kancane Kancane Sine-Arthritis
by UTrey Hilburn III September 13, 2021
by UTrey Hilburn III September 13, 2021 363 ukubukwa
Nokho, Abashintshi ulapha ukusikhumbuza ngokufa kwethu nokuthi siyaguga. Abashintshi: I-Movie ibuyela ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini ukugubha iminyaka engu-35 yasungulwa ubusuku obubili obukhethekile kuphela. I-shindig ye-Fathom Events ibuyela esikrinini esikhulu ukuze iqhume i-Decepticon butt futhi isenze sikhale sengathi siyizingane ezincane futhi.
Amazwibela we Abashintshi: I-Movie kuhamba kanjena:
“Sekuyiminyaka eyizinkulungwane ama-Autobots angamaqhawe, aholwa ngu-Optimus Prime (Peter Cullen), abelokhu elwa namaDecepticons amabi, aholwa nguMegatron (uFrank Welker). Njengoba impi phakathi kwama-Autobots namaDecepticons ishubile eMhlabeni, usongo olukhulu kakhulu lusondela. I-Unicron (i-Orson Welles, iCitizen Kane), iplanethi enkulu eguqula konke esebenzisa konke okusendleleni yayo, ilibangise eCybertron ukuyoshwabadela izwe lasekhaya leTransformers nokusula ama-Autobots namaDecepticons. Ukuphela kwethemba yi-Autobot Matrix yobuholi. Njengoba izitha ezintsha zibazingela futhi kunezingozi ezicashile kuwo wonke amagumbi omthala, ama-Autobots enza umsebenzi oyingozi wokusindisa iplanethi yawo ezoguqula ikusasa labo kuze kube phakade. ”
Le movie yayinkulu kakhulu ngiseyingane. Kwakucindezela ngokuphelele futhi kwakungekho bhizinisi lokuqeda sonke isizukulwane sezingane. Ngisho ukuthi lo uphume eshwibeka futhi wafakazela khona manjalo ukuthi kuzoba nzima uma kuqhathaniswa nombukiso. Abaphangi, ibulale abalingiswa asebenesikhathi eside bengekho.
Unga-oda ngaphambilini kwakho amathikithi khona LAPHA ubusuku obubili obukhulu obenzeka ngoSepthemba 26 no-27. Bheka izinhlu kusixhumanisi ukuze ubone ukuthi idlala ngakini yini.
Ingabe ukhale kakhulu njengoba senzile ngesikhathi Abashintshi: I-Movie?